बरुण हाइड्रोपावरको दुई आर्थिक वर्षको साधारण सभा आज, के प्रस्ताव ल्याउदै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » बरुण हाइड्रोपावरको दुई आर्थिक वर्षको साधारण सभा आज, के प्रस्ताव ल्याउदै ?
काठमाडौं - असोज २७ गते बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको १३ र १४ औं वार्षिक साधारण सभा युनियन हाउस, अनामनगर काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुँदैछ । कम्पनीले सभामा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ५% बोनस दिने विशेष प्रस्ताव पेस गर्दैछ । त्यस्तै, कर तिर्न कम्पनीले ०.२६३% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गर्दैछ ।
बरुणले यसअधि विशेष साधारण सभाबाट पारित भएको १००% हकप्रद सेयर वितरणको निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा लैजाँदैछ । यसैगरी, कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७२।७३ र २०७३।७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान र नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आधारमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ ।